နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » King of Fighters Yuyu Hakusho Wars
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: King of Fighters Yuyu Hakusho Wars
Yuyu Hakusho စစ်ပွဲများသငျသညျအခမဲ့အဘို့ကစားနိုင်သည်ကိုအွန်လိုင်းမှဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂျပန် anime Yu Yu Hakusho ထံမှ Underworld ထောက်နှင့်သူ့ pals နတ်ဆိုးများနှင့်ဆိုးသောလူဆီသို့ဦးတည်စစ်သှားဖို့အတှကျအခြိနျဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အဘို့ပြင်ဆင်ရ
ထိန်းချုပ်ရေး: king of fighters, king of fighters games, fighters, Yuyu Hakusho, Wars, wars games
ကစား: 24,982 tag ကို: king of fighters, king of fighters games, fighters, yuyu hakusho, wars games, စစ်
အဆိုပါအဲလ်ဆာနဲ့ Anna မင်းသမီးသူတို့ရဲ့ဗီရိုစည်းရုံးဖို့ကူညီလိုပါတယ်။ သာ သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်သန့်ရှင်းစည်းရုံးအရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကား, သာသစ်အစိတ်အပိုင်းများထွက်ခွာရှိသမျှကိုအဝတျအစားနှင့်အသစ်ဖိနပ်အဟောင်းဘေးဖယ်ထားကြ၏။
mr bean ကိုစစ်သည်တော်
ဒီပျော်စရာဂိမ်းထဲမှာမစ္စတာ Bean ကိုသူ့ကိုလမ်းအပေါင်းတို့၌မိကျောင်းနှင့်ဂြိုလ်သားစစ်တိုက်ခြင်းကကူညီတဲ့စစ်သည်တော်ဖြစ်ပါတယ်။
Baron တံခါးဝ 2
ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကသင့်ရဲ့မစ်ရှင်ဟာအလွန်အရေးပါသည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ, အားလုံးသင့်ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်စွမ်းရည်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကပြန်ပေးဆွဲခံရမင်းသမီးလေးကိုကယ်တင်ရန်ရှိသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးအေးမြစွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား သငျသညျဒီဂိမ်းကိုချစ်လိမ့်မည်ဟုယုံမှားစရာမရှိ!
အဆိုပါနဂါးငွေ့တန်းတပါးအာကာသသင်္ဘောများတစ်အလုံးအရင်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနဂါးငွေ့တန်းခုခံကာကွယ်နှင့်ကျူးကျော်ရပ်တန့်ဖို့သင်မှတက်သည်။ သငျသညျ Strategic အချက်များအတွက်မျှော်စင်နေရာနှင့်သင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုသူတို့နှင့်အတူအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သေချာအောင်ရန်ရှိသည်။ သငျသညျကိုဘယ်လိုပြသရပါလိမ့်မယ်
ဒါဟာပထမဦးဆုံး kof တောင်ပံမွေးဖွားခဲ့သည်ကတည်းက7နှစ် (2007) ဖြစ်တော်မူပြီ။ ယခု 2014 ခုနှစ် kof Wing ထွများလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူကျနော်တို့အနာဂတ်သို့လာမည့်ခြေလှမ်းယူပါ။
တိုက်လေယာဉ်တောင်ပံ 1.8 ရှင်ဘုရင်
ယခုမှတက် web ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအ flash ကိုတိုက်ပွဲဂိမ်း, ဒါဟာအလွန်ရေပန်းစား Arcade တိုက်ပွဲများဂိမ်းတိုက်လေယာဉ်များ၏ရှင်ဘုရင်သည်အပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီဂိမ်းဟာချောချောမွေ့မွေ့လှုပ်ရှားမှု, အစွမ်းထက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တိုက်ပွဲများ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာခံစားမှုပေါင်းစပ်။
ဝံပုလွေနှင့်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်အားလုံးနှစ်ဦးစလုံးမှောင်မိုက်မျိုးနွယ်မှပိုင်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအကြားဆက်ဆံရေးဟာအလွန်ဆိုးရွားသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကလူ့များ၏တိုးပွားလာနံပါတ်, Vampire နဲ့ဝံပုလွေ၏နေထိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်သေးငယ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် contact.With အတွက်ဘယ်တော့မှ၏သဘောထားကိုယူ
This zombie killer broke intoahospital withadesire to kill anyone who stood in front armed withachainsaw as he goes through some celebrities to showagood performance to advance to the next phase because the challenges are only beginning